सुवास नेम्वाङको टिप्पणी : प्रचण्ड र माधव नेपाललाई चिन्‍नै छोडे - Himali Patrika
सुवास नेम्वाङको टिप्पणी : प्रचण्ड र माधव नेपाललाई चिन्‍नै छोडे
हिमाली पत्रिका ३ माघ २०७७, 6:27 pm
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले केपी ओलीलाई अस्वीकार गरेर के गर्न खोजेको भन्दै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालमाथि प्रश्न गरेका छन् । शनिबार काठमाडौंको तीनकुनेमा आयोजित नेकपा ओली समूहको कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेम्वाङले यस्तो प्रश्न गरेका हुन् ।
अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपालले प्रतिक्षी दलको नेतालाई भेटेर संसद् पुनर्स्थापनापछि तपाईंलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु भनेकोप्रति व्यङ्ग्य गर्दै ती नेतालाई कताकता चिने जस्तो लागेको तर अहिले बिर्सिएको टिप्पणी नेम्वाङले गरेका छन् ।
‘सञ्चार माध्यमले एउटा समाचार ल्यायो । दुई नेताले भेटेर प्रतिपक्षी साथीलाई पुनर्स्थापित संसदको प्रधानमन्त्री तपाईंलाई नै बनाउँछौँ भनेर भने रे ! मलाई यो कुरामा विश्वास छैन । फलानो फलानो जानुभयो भनेर साथीहरुले नक्सा पनि देखाउनु भयो । कताकता चिने जस्तो लाग्यो तर अहिले बिर्सिए’, नेम्वाङले भने, ‘केपी ओलीलाई अस्वीकार गरेर गर्न खोजेको के हो ? देशले त्यसको जवाफ खोजिरहेको छ । मेची महाकालीले त्यसको जवाफ खोजिरहेको छ । अहिले त्यसको जवाफ म खोजिराखेको छु ।’
पर्टी विभाजन भएकोतर्फ लक्षित गर्दै उनले नेकपाको अध्यक्ष केपी ओली र महासचिव विष्णु पौडेल भएको प्रष्ट पारे । उनले अध्यक्ष र महासचिव भएको पार्टी नै आधिकारिक भएको समेत दाबी गरेका छन् । ‘हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष केपी ओली त्यसका महासचिव विष्णु पौडेल हुनुहुन्छ । मैले नाम लिनुको विशेष कारण छ’, नेम्वाङले भने, ‘हाम्रा दोस्रा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ हुनुहुन्छ । वरिष्ठ नेतामा माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल कसैलाई पनि हामीले कारबाही गरेर निकालेका छैनौँ । किनभने हामी पार्टी एकताको पक्षमा छौँ ।’
नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहले अध्यक्ष ओलीलाई कारबाही गरेकोप्रति उनले आपत्ति जनाए । पार्टी महाधिवेशनमा हारेको मान्छे अध्यक्ष बनेको भन्दै माधव नेपालप्रति व्यङ्ग्य गर्दै उनले अध्यक्ष बन्ने यत्ति सजिलो प्रक्रिया थाहै नभएको टिप्पणी गरे ।
‘केपी कमरेडलाई कारबाही गरेर आफैँ अध्यक्ष हुनुभयो रे ! । मैले नाम बिर्सिए । केही अगाडि केपी कमरेडसँग निर्वाचनमा हार्नु भएको थियो रे ! अहिले उहाँलाई निकालेर अध्यक्ष हुनुभयो रे !’, उनले आश्चर्य व्यक्त गर्दै भने, ‘कस्तो सजिलो रहेछ प्रक्रिया मलाई थाहै थिएन ।’
अध्यक्षलाई कारबाही गर्दै आफैं अध्यक्ष भएको थाहा पाएको तर, महासचिवलाई निकालेर १० जनालाई महासचिव बनाउन लागेको भन्दै प्रचण्ड–नेपालको उनले आलोचना गरे ।
‘फेरि समाचार सुनियो महासचिव पौडेललाई पनि कारबाही गरियो रे ! यो सबै त बुझियो । अध्यक्षलाई निकालेर आफै बन्नु भएछ । महासचिवलाई निकालेर आफैँ बन्नुहोला ! त्यसमा पनि पाँच १० जना लाग्नु भएको छ रे ! महासचिव कसलाई बनाउनु हुन्छ थाहा छैन’, नेम्वाङले भने ।